Claude Bernard Lyon University 1 - Fianarana any Frantsa, Eoropa
Claude Bernard Lyon University 1
Claude Bernard Lyon University 1 Details
fanafohezan-teny : UCBL
mpianatra (eo ho eo.) : 35000
Aza adino ny discuss Claude Bernard University Lyon 1
Enroll at Claude Bernard University Lyon 1
Claude Bernard Lyon 1 dia oniversite izay manome fampianarana ho an'ny 40,000 ireo mpianatra isan-taona tany an-tsaha ny siansa sy ny teknolojia, ny fahasalamana sy ny fanatanjahan-tena. Claude Bernard Lyon 1 is part of Université de Lyon, manan-danja indrindra frantsay University toerana any ivelan'ny faritra Paris.
Rehefa avy nanorina ny matanjaka ara-tsaina laza na any Frantsa sy manerana izao tontolo izao, Claude Bernard Lyon 1 University dia mandrakariva nanosika ny faritry ny fahalalana,fampiroboroboana ny fampianarana amin'ny alalan'ny fikarohana ary tsy tapaka mampahery fifanakalozan-kevitra eo amin'ny siansa sy ny fiaraha-monina.
Claude Bernard Lyon 1 dia University ho velona amin'ny fiainana ho amin'ny tanteraka. ny campus, miorina ao am-pon'ny niavaka faritra, dia velona amin'ny toerana be ny asa, manampy ireo mpianatra mba hampivelatra sy hivoaka ho fahatsapan-tena tanteraka. The University Lyon 1 no misy eo amin'ny 13 toerana samy hafa ao amin'ny efatra amin'ny foibe ny asa lehibe ny Rhône-Alpes, ao Frantsa : ny tanànan'i Lyon, Saint-Etienne sy Bourg-en-Bresse sy ny tanàna ny Roanne. Ny University tena manampy amin'ny fampandrosoana ny faritra ity amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny eo an-toerana ny firenena sy ny orinasa sy ny manam-pahefana isam-paritra.
Lyon 1 mampiasa 2900 mpampianatra / mpikaroka sy ny mpampianatra, izay 700 ihany koa ny mpanao hopitaly ary koa ny ara-teknika sy ny fitantanana mpiasa ny 1800. Lyon 1 lasa mahaleotena fananganana tamin'ny 1 Janoary 2009 ary tanteraka teti-bola ny 405 M € Lyon 1 dia iray amin'ireo mpampiasa lehibe indrindra ao amin'ny faritra.
Ho voaray tsara sy oniversite, amin'ny fampianarana izay mifanaraka amin'ny zavatra ilain'ny fiaraha-monina ny
Lyon 1 ny mpianatra mponina dia ny efa ho 40.000. 54% ny mponina io dia vehivavy sy 18% mandray ny mpianatra anie. Lyon 1 Mirehareha ihany koa ny manisa be ohatry ny vahiny mpianatra (10,5% ny ny mpianatra, ny 134 zom-pirenena).
Efa ho 80% ny mpianatra hifidy ny arak'asa fandaharana : Lyon 1 mamokatra tsy latsaky ny 9250 nahazo diplaoma isan-taona.
Ny fianarana fandaharanasa amin'ny tolotra ao amin'ny fahasalamana siansa misaina manome fahafahana hahazo ny fitambaran'ny asa matihanina amin'ny fitsaboana (dokotera ny fitsaboana, pharmacist, mpitsabo nify, mpampivelona) ary paramedical asa matihanina (audioprosthesist, ergotherapist, physiotherapist, teny mpitsabo, orthoptist, physiotherapist manokana in psychomotor fampidirana).
Lyon 1 sehatry ny siansa manome be dia be ihany koa ny safidy ny foto-kevitra: ny DUT diplaoma manome fanofanana amin'ny 17 faritra ny fahaizana ara-teknika ho an'ny hoavy mpitantana. 57 arak'asa mari-pahaizana licence mpianatra manomana diplaoma ho an'ny afovoany fitantanana asa. 111 tompony ny fiakarana (arak'asa, reasearch na mitambatra arak'asa sy ny reasearch) manomana ny mpianatra ho an'ny mpitantana ambony asa na noho ny asa fikarohana sy ny fampandrosoana. Lyon 1 koa dia manolotra avo dia avo fari-manokana fanofanana arak'asa amin'ny injeniera (Polytech Lyon) ary actuarial Siansa (Isfara).
L'ESPE, ny mpampianatra fananganana fanofanana arak'asa manokana ao amin'ny fanomanana ny ambaratonga voalohany sy faharoa mpampianatra (rehetra lohahevitra).
Lyon 1 loka 300 doctorates isan-taona ny mpianatra tao amin'ny vokatry ny resarch fampianarana, natao tao amin'ny oniversite ny laboratoara, amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miasa indostria na orinasa fanabeazana hafa.
Ary koa ny fanomezana ny sakany undergraduate fampianarana voalohany fandaharana, Lyon 1 miaraka orinasa tsy miankina na notohanan'ny mpianatra amin'ny fanohizana matihanina fampandrosoana fiofanana.
Ny mpanao fampaherezana ny fanavaozana
Lyon 1 dia ny multidisciplinary manokana oniversite roa fototra ka nampihatra fikarohana ary toy izany dia afaka mirehareha mihoatra noho 4415 iraisam-pirenena dia namoaka lahatsoratra sy 44 Patents isan-taona. The University Manana 68 fanjakana-vatsian'ny fikarohana vondrona miasa amin'ny telo-tsaha; fahasalamana, ny tontolo iainana sy ny teknolojia ara-nofo. Ary nisy maro ireo vondrona ireo ny vokatry ny fikambanana maromaro laboratoara ho fikarohana sampahony. Izany dia manome fahafahana ireo rafitra iraisana mba manana saha midadasika be ny fahaizany sy ny fidirana amin'ny, na ny fividianana ny, fitaovana fanaovana fikarohana fampisehoana ambony noho ny mety ho azo atao toy ny rafitra tsirairay.
Ny University sehatra tsy miankina ny orinasa mpanelanelana, EZUS Lyon1 sy Lyon Engineering Project (molotra) manampy Lyon 1 ny laboratoara, no mamaly soa aman-tsara ny antso mba malemy fanahy ho an'ny firenena sy ny iraisam-pirenena fikarohana fifanarahana.
Nasionaly sy iraisam-pirenena ekena
Ny University dia mivonona ny mihoatra noho 80 Vondrona Eoropeana, ary mandray anjara mavitrika tetikasa ao amin'ny fahafito Framework Programme for Fikarohana sy ny Teknolojia Development (FP7).
Ny sata iraisam-pirenena ny Lyon 1 toy ny afovoan-tsara ho an'ny fikarohana vao haingana no nampiseho:
ny ara-bola manohana ny Anjerimanontolo omena ny National Agency for Fikarohana,
noho ny fandraisana anjara amin'ny University ao amin'ny thematic Network for Advanced Fikarohana niantso Therapeutic fanavaozana sy Infectiology,
ary koa ny thematic Centres for Fikarohana sy Healthcare: Neurocap (neuroscience), Centaure (taova transplantation) ary Synergie Lyon Cancer
sy ny Institut CarnotI @ L: fitaterana sy ny fitaovana siansa.
Add ity 6 fikarohana sampahony tany an-tsaha ny fahasalamana siansa (Lyonbiopole), nanotechnology (Minalogic), Simia sy ny tontolo iainana (axelera), plasturgy (Plastipolis), lamba (Techtera), fanatanjahan-tena (Sporaltec) sy ny fitateram-bahoaka (Lyon Urban Truck sy ny fiara fitateram-bahoaka 2015).
Faculty of Medicine Lyon East
Faculty of Medicine and Maieutic Lyon Sud – Charles Mérieux
Faculty ny Odontology
Institute of Pharmaceutical and Biological Sciences
Rehabilitation Institute of Sciences and Techniques
Faculty of Science and Techniques of Physical and Sports Activities
University Institute of Technology Lyon 1
Financial Science Institute and Insurance
School of the Teaching and Education
Ianao ve mila discuss Claude Bernard University Lyon 1 ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Claude Bernard Lyon University 1 amin'ny Map
Photos: Claude Bernard Lyon University 1 ofisialy Facebook
Claude Bernard Lyon University 1 hevitra
Join to discuss of Claude Bernard University Lyon 1.